I-China BaGa4Se7 Amakhemikhali Omkhiqizi Nomphakeli | I-Dien
iqembu lesikhala: PC
Transmission ububanzi: 0.47-18μm
Umlingani omkhulu we-NLO: d11 = 24 pm / V
Ukuqothula @ 2μm: 0.07
Umkhawulo wokulimala (1μm, 5ns): 550MW / cm2
Amakristalu wekhwalithi ephezulu we-BGSe (i-BaGa4Se7) yi-analogue ye-selenide ye-chalcogenide compound BaGa4S7, isakhiwo sayo se-acentric orthorhombic esatholwa ngo-1983 kwathi umphumela we-IR NLO wabikwa ngo-2009, uyikristalu entsha ye-IR NLO. Yatholwa ngohlelo lweBridgman – Stockbarger. Le kristalu ibonisa ukuhanjiswa okuphezulu ebangeni elibanzi le-0.47-18 μm, ngaphandle kwesiqongo sokumunca cishe ku-15 μm.
I-FWHM ye (002) peak rocking curve icishe ibe yi-0.008 ° futhi ukudluliswa ngocwecwe olungu-2 mm obukhulu (001) kungama-65% ngaphezu kobubanzi obubanzi be-1-14 μm. Izakhiwo ezahlukahlukene ze-thermophysical zalinganiswa ngamakristalu.
Ukuziphatha kokunwetshwa okushisayo ku-BaGa4Se7 akubonisi i-anisotropy eqinile nge-αa = 9.24 × 10−6 K − 1, αb = 10.76 × 10−6 K-1, ne-αc = 11.70 × 10−6 K-1 eceleni kwezimbazo ezintathu ze-crystallographic . Ama-coefficients we-thermal diffusivity / thermal conductivity alinganiswe ku-298 K angama-0.50 (2) mm2 s − 1 / 0.74 (3) W m-1 K-1, 0.42 (3) mm2 s − 1 / 0.64 (4) W m-1 K − 1, 0.38 (2) mm2 s − 1 / 0.56 (4) W m-1 K-1, eceleni kwe-a, b, c i-crystallographic axis ngokulandelana.
Ngaphezu kwalokho, umkhawulo wokulimala komhlaba we-laser ulinganiswe ukuthi ube yi-557 MW / cm2 kusetshenziswa i-Nd: YAG (1.064 μm) laser ngaphansi kwezimo ze-5 ns pulse width, 1 Hz frequency, no-D = 0.4 mm size size.
I-BGSe (BaGa4Se7) i-crystal ikhombisa impendulo eyimpuphu yesizukulwane sesibili se-harmonic (SHG) ecishe icishe izikhathi ezi-2-3 kune-AgGaS2. Umkhawulo wokulimala we-surface laser ucishe ube izikhathi eziyi-3.7 ze-AgGaS2 crystal ngaphansi kwezimo ezifanayo.
I-BGSe crystal inokuthambekela okukhulu okungekho emgqeni, futhi ingaba nethemba elibanzi lokusebenzisa okusebenzayo maphakathi ne-IR spectral region.Ikhombisa i-terahertz phonon-polaritons ethokozisayo kanye nama-coefficients aphezulu angenalayini wesizukulwane se-terahertz.
Izinzuzo ze-IR laser okukhipha:
Kufanelekile ukuthola imithombo ehlukahlukene yokumpompa (1-3μm)
Ibanga lokukhipha i-IR elibanzi (3-18μm)
OPA, OPO, DFG, intracavity / extravity, cw / ishayela ukudonsa
Isaziso esibalulekile: Njengoba lokhu kuyikhristalu yohlobo olusha, ingilazi engaphakathi ingaba nezintambo ezimbalwa, kepha asikwamukeli ukubuyiselwa ngenxa yalesi sici.
iqembu lesikhala PC
Transmission ububanzi 0.47-18μm
Coefficient enkulu yeNLO d11 = 24 pm / V
Umkhawulo wokulimala (1μm, 5ns) 550MW / cm2